Nyakutiza Mhosva kuAmerica Otarisana neKudzoserwa kuOhio Kunotongwa Mhosva Dzake
The Idaho Correctional Center is shown south of Boise, Idaho, operated by Corrections Corporation of America, June 15, 2010.
Mumwe murume weku Chiredzi akatiza kuAmerica mushure mekuwanikwa aine mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora achishanda nevamwe vake vemuZimbabwe akabatwa kuChiredzi uko kwaapinda mudare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutiza mhosva dzaakara kuAmerica.
Andrew Takashinga Bere, uyo ane makore makumi maviri nemasere, akasungwa nemusi weChishanu, akamiswa pamberi pedare nemusi weMugovera, mutongi wedare muChiredzi, Amai Geraldine Mutsotso, vakati agare muchitokisi akamirira kuti azoendeswa kuAmerica kwaakapara mhosva.
Asi Gweta raBere, VaCharles Vhudzi, vati vaendesa nyaya iyi mudare neChitatu vachikumbira kuti Bere abhadhare mari yechibatiso kuitira kuti agare kumba kusvika paachaendeswa kuAmerica sezvo mutemo uchiti anofanira kundotongwa kwaakaparira mhosva.
"Vakasungwa nemusi weChishanu vakambopinda mukoti musi weSaturday then the matter was referred kuti izodzoka mukoti on Monday saka koti yakati azodzoke ku process ye extradiciton mukoti nhasi. Vane ma charges akati wandei pane nyaya dzekuti nechirungu waya fraud ku America iye nevamwe vake pari kunzi pakabiwa mari inosvika kuma 7 million," vadaro VaVhudzi.
Zvinonzi Amai Mutsotso vati Bere amiswe pamberi pedare mangwana kuti azoudzwa kuti anopihwa mvumo yekubhadhara chibatiso here kana kuti kwete.
VaZvudzi vaudza Studio7 kuti vanotarisisra kuti dare richapa Bere mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana vachiti haana pfungwa dzekutiza, uye zviri pamutemo kuti anenge apara mhosva adzorerwe kundotongwa kwaakaparira mhosva yake.
Muchuchusi wedare, Muzvare Chiedza Muhwandavaka vakaudza dare kuti kubva muna Ndira wegore ra 2007 kusvika muna Kubvumbi 2012, kudunhu re Ohio, Bere nevamwe vake vaviri vanofungidzirwa kuti vari muMasvingo, Jullius Marimbire na Kudzaiishe Marimbire, vaibira zvizvara zveAmerica mari dzemutero, vachishandisa magwaro evanhu zvisiri pamutemo.
Vanonzi mari yavakaba inosvika mamiriyoni manomwe emadhora, uye mari iyi yaiendeswa kuZimbabwe.
Pakatiza vatatu ava muAmerica muna 2014, America yakabva yazivisa pasi rose kuti yaitsvaga vatatu ava nemhosva dzavakapara muAmerica.
Zimbabwe neAmerica dzine chibvumirano che extradition treaty chakanyoreranwa muna Chikunguru 1997 chinopa nyika mbiri idzi kuti dzipane vasungwa vanenge vapara mhosva zvisineyi kuti chizvarwa chenyika ipi.